AVIAN STAPHYLOCOCCOSIS: SIDEE AY U BAAHAN YIHIN CUDURRADA, SIDA LOO OGAADO SIDA LOO HELO? - BEERAHA DIGAAGA
Sidee bay halis u tahay shimbirta staphylococcus, sida loo ogaado iyo sida loo daaweeyo?
Shimbiraha Stafilokokkoz (Stafilokokkosis avium) - goosgoos ah ama enzootic cudurka faafa ee cayn kasta oo haadka gudaha iyo duurjoogta ah, lagu gartaa ba'an, subacute iyo dabcan chronic iyo muujinayaan calaamadaha caafimaad ee septicaemia, arthritis, synovitis, kloatsitov, iyo xaaladaha ka yar - dermatitis vesicular, caabuq ku JQSHM infraorbital iyo hilqado.
Maanta, cudurku wuxuu ka diiwaan gashan yahay dhammaan dalalka adduunka. Waxaa lagu gartaa faafidda daciifnimada iyo dhimashada hooseeya.
Marka laga reebo waa digaagga la kariyey, kuwaas oo lagu hayo kuleylaha oo leh cufnaanta sare ee jilicsanaanta deegaanka ama marka ay ku dhacdo inta lagu jiro tallaalka.
Waa maxay shimbirta staphylococcosis?
Dareeraha wadnaha ee pathogen-ku wuxuu ku faafaa dhammaan noocyada shimbiraha.
Waxaa ka mid ah staphylococcosis digaagga:
digaagga da'doodu tahay 11-16 bilood;
Staphylococcus markii hore waxaa la diiwaan geliyey loona qeexay cudur khaas ah 100 sano ka hor.
Waqtigeena, cudurku wuxuu ku faafaa adduunka oo dhan. Marka lagu daro digaagga guriga, calsan, bullfinches, cilladaha, iyo kaneecada waxay muujinaysaa inay u nugul yihiin cudurku.
Mashaaricda lagu gudbiyo staphylococcosis shimbiraha:
xiriirka, taas oo ah, taabashada tooska ah ee shimbirta jirran iyo caafimaadka leh;
gudbinta, tusaale ahaan, qaniinyada qaniinyada dhiig-nuugista;
Afkaar - adoo gashanaya cunto quudin iyo biyo.
alaabta daryeelka wasakhaysan;
ay ku sumoobeen cuntada raashinka iyo biyaha.
Calaamadaha cudurka ayaa laga yaabaa inay waxtar yeeshaan xadgudub ku ah shuruudaha digaagga.
Waxyaabaha ku jira qolka qoyan, dadka aadka u sarreeya, cuntooyinka saboolka ah, isbeddelka heerkulka isbeddelka ah ee guryaha digaaga, hawo aan ku filnayn iyo, natiijada, kororka diirada ammonia ee hawada, wareegyada soo noqnoqota ee dadka digaaga ah. Sidoo kale, sababta cudurku wuxuu noqon karaa tallaalka digaagga ee tallaalka nool ee tallaalka.
Badanaa, cudurada staphylococcal waxaa lagu soo bandhigaa wadata pasteurellosis, Escherichia coli, Proteus, iyo Pseudomonas aeruginosa.
Albaabka infekshanku badanaaba waa maqaarka dhaawacmay maqaarka sababtoo ah dhaawacyada sagxadaha, maqaarka iyo dhagaha. Digaagga cusub ee dhalashada, goobta infekshanku wuxuu noqon karaa xuddunta aan caafimaad lahayn, taas oo horseedaysa horumarinta cudurka 'omphalitis'.
Qawaaniin qalliin oo yar yar sida jarista gogol, cirridka, ka saarista baalasha, ama miisaaniyada isku-dhafka ee tallaalka ayaa sidoo kale keeni kara caabuq.
Iyada oo hoos u dhac ku yimid heerka difaaca xoolaha oo ay sabab u tahay horumarinta cudurrada faafa ee saameynaya shaqooyinka Fabricius bac ama thymus haddii ay dhacdo in uu cudurku ku dhaco staphylococcus ee digaaga, horumarka fulmin ee staphylococcal septicaemia ayaa lagu arkay.
Dhibaato dhaqaale laga bilaabo cudurku wuxuu inta badan ka kooban yahay:
yareynta wax soo saarka ukunta (celcelis ahaan 5-20%, laakiin waxaa laga yaabaa inay ka sareeyaan);
Khasaare ka yimid dhimashada (3-15% dadka buka);
khasaare ka soo jiidashada (10-30%).
Sidoo kale qiimaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah kharashka daaweynta iyo jeermisyada guryaha digaaga.
Baaritaanka shimbiraha staphylococcus - wakiil ka mid ah cirbadda Staphylococcus ee qoyska Micrococcaceae.
Kuwani waa jeermisyo guud, 0.8-1 mikron oo cabbirka, immobile.
Marka uu midabeynayo Gram - positive. Khilaafka iyo koofiyadaha ma sameysna. Muuqaal lagu dhajiyo kooxo isku mid ah oo isku mid ah oo canab ah.
Wakiilo ka mid ah noocyada nooca stafylococcus sida badanaa waa laga go'doomay digaagga.:
St. cadaadiska pyogenes;
St. Cudurka dabaysha.
St. aureus (Staphylococcus aureus) ayaa badanaa lagu soo koobay lafaha shimbiraha, guntimaha lugta iyo xubnaha lugaha. In badanaa caadi ahaan, waxaa lagu dhejin karaa maqaarka, caleenta qulqulka, wadnaha, vertebrae, indhaha, iyo sidoo kale beerka iyo sanbabada qaabka granulomas.
Calaamadaha ugu badan ee cudurada wadnaha ee staphylococci waa cirbadaha enzymes, exo-iyo enterotoxins.
Dareeraha ayaa daciif u ah waxqabadka jeermiska. In shimbir shimbirta la qalajiyey, waxay awood u leedahay inay sii wado waxtarkeeda qiyaastii 5 bilood heerkul ah laga bilaabo +10 ilaa -25 digrii Celsius.
Muddada cudurku wuxuu noqon karaa 48 ilaa 72 saacadood.
Marka la eego nooca socodka, qaababka ba'an iyo kuwa dabiiciga ah ayaa la kala saaraa. Xaalad caafimaad oo degdeg ah, calaamadaha ayaa u muuqda sida dermatitis vesicular, cyanosis ee meelaha maqaarka ee saameeyey iyo caabuqa xuubka.
Xaaladda koorsada joogtada ah, cudurku wuxuu muujiyaa hoos u dhac ku yimaada cuntada, hoos u dhaca wax soo saarka, daalidda, iyo ankilooska xubnaha.
Calaamadaha hore ee cudurkaWaxaan ku dari karaa lameness mid ka mid ah suunka, lakariga, ruxin boodhka, dhogorta mid ama labada baalba. Shimbirtu waxay noqotaa mid firfircoon, waxay leedahay qandho. Xaaladaha degdega ah, niyadjab daran ayaa laga yaabaa inay dhacaan, oo ay ku xigto dhimasho.
Haddii uu cudurku noqdo mid daba-dheeraaday, xayawaanka ku jira shimbirta ay saameysay ayaa barara. Waxay ku fadhiistaa, nuugay xubnahooda iyada oo ku tiirsan laabta. Shimbirku waa mid aan firfircooneyn.
Qalalaasaha Aarterz waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican iyagoo qorraxdu si toos ah ugu xiran yahay midabkooda!
Ma u baahan tahay inaad baratid sida loola tacaali lahaa pasteurellosis ee digaagga? Halkan waxaad ka heli doontaa jawaabta!
Staphylococcal omphalitis waxaa lagu muujiyey habab barar ah oo ku yaalla aagga xabagta xumbada iyo unugyada ku xiga iyagoo leh qaabka dambe ee necrosis ee aaggan.
Marka la sameynayo baaritaanka shaybaarka ee shakhsiyaadka jiran, bararka qaybta wajiga ee madaxa iyo meelaha intermaxillary ayaa lagu xusay. Xaaladaha qaarkood, dhibco buluug-cagaaran oo qiyaaso kala duwan ah ayaa lagu arki karaa maqaarka.
Ciladda cudurka ayaa lagu sameeyaa qaab isku dhafan: iyada oo ku saleysan sawirka kiliinikada, xogta la helay ka dib markii natiijooyinka qaliinka iyo natiijada shaybaarka la sii daayo cudurkan.
Cilmi-baarista nolosha, waa inaad qaadataa shimbir buka dharbaaxo, xoqin ama maydhid laga bilaabo aagga ay dhibaatadu saameysey ama maadada qashin ka timid shimbir shaki laga shakiyey.
Si loo xakameeyo cudurku ku jiro sheybaarka goobaha ay dhibaatadu saameysey iyo xubnaha jirka waxay ku beeri doonaan BCH (maraq peptone hilibka) ama MPA (agagaarka peptone agar). Noocyada soo baxa waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo la adeegsanayo baaritaanka coagulation.
Staphylococcosis waa in laga takooro lafa-dabeecada iyo jooniska.. Laga soo bilaabo cudurrada aan la isqaadsiin karin, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro daaqada (laga soo bilaabo la'aanta qaybaha raadadka) iyo dermatitis-ka la tuuro. Biopobactering sternal to determine the viralness of staphylococcus on digaagga 30-60 maalmood jir ah by infaperitoneal.
Calaamadaha ugu horreeya ee cudurkan, shimbir bukaan ayaa laga saaraa guriga, waana la kala-qaadaa.
Shimbirta ayaa joojisa inay bixiso quudin shaki leh oo ka timaadda xayawaanka, waxay baaritaan ku sameeyaan joogitaanka staphylococcus pathogenic pathogenic.
Daaweynta, kooxo kala duwan oo antibiyootiko ah ayaa loo isticmaalaa. Markuu dooranayo daroogada waa inuu ku saleysnaado xogta imtixaanka ee dareenka jiritaanka pathogen ee antibiyootigyada kala duwan.
Xaaladda guud ee shimbirta jiran waa la tixgeliyaa. Daaweyntu waa inay ahaato mid dhamaystiran. Si taas loo sameeyo, isticmaal daawooyinka kor u qaada guud ahaan jirka jirka, oo ay ku jiraan fitamiinada.
Ka hortagga iyo xakameynta tallaabooyinka
Si loola dagaallamo cudurka, tallaabooyin guud ayaa loo qaadayaa si loo hagaajiyo cuntada iyo xaaladaha digaagga.
Goobaha shimbirta lagu hayo, jeermiska waxaa lagu fuliyaa joogitaanka shimbirta iyadoo la isticmaalayo aerosol aad u fara badan oo ah lactic acid, resorcinol, bianol, glycol triethylene.
Naasnuujinta siminaarada iyo isweydaarka ee ukumaha, dhirta, engejinta iyo ukumaha ayaa isticmaala 40% rasmi ah formaldehyde ee xisaabinta 10-15 ml mitir 1 mitir oo qol ah. Xaaladdan, heerkulku waa inuusan ka yaraan 15 darajo. Waqtiga sawirka - 6 saacadood.
Waxay isku dayaan in ay ilaaliyaan shimbirta saameynta ay ku yeelato arrimaha walbahaarka leh sida gaadiidka muddada dheer, ku xadgudubka xaaladaha microclimate iyo isticmaalka tallaalka nool.
Marka shimbir cusub lagu keeno dhulka beeraha digaaga, waa in la karantiilaa ugu yaraan 30 maalmood ka hor inta aan la gelin shimbir muhiim ah.
Si looga hortago digaagga beeraha aan fiicneyn ee staphylococcus, staphylococcal toxoid ayaa loo isticmaalaa. Digaagga waxaa la tallaalaa laba jeer toddobaadkii 10-20 maalmood.
Daawada walaxda ah waxaa lagu maamuli karaa labadaba. Xasaanaddu waxay u muuqataa 7 maalmood kaddib marka daaweynta ugu dambeysa ay socoto waxayna socotaa 2 bilood.